ब्यूटीसीयन पेशानै महिलाहरुका लागी राम्रो पेशा : मिना लामा – SajhaPana
ब्यूटीसीयन पेशानै महिलाहरुका लागी राम्रो पेशा : मिना लामा
साझा पाना २०७६ चैत्र १० गते १६:११ मा प्रकाशित
काठमाडौ । नेपालमा ब्यूटीसीयन पेशा हाल आहेर समग्र महिला हरुका लागी राम्रो पेशा बन्दै गहेको छ । ब्यूटी पार्लरको अवसर , चुनौती र युवापुस्ताको आकर्षणबारे ब्यूटीसीयन मिना लामासंग साझापाना अनलाइनका लागी मोहन अधिकारीले गरेको कुराकानी:
तपाई यो पेशमा कसरी प्रबेश गर्नु भयो ?
म स्कुलेजिवनकाल देखीनै पढाइमा अग्र स्थानमा थिए । पढाइ संगै मलाई सानो उमेर देखीनै ब्यूटीसीयनमा रुची राख्थे । पछि
आयर यो पेशामा आबद्ध भए ।
तपाइको बिचारमा यो पेशालाई कसरै लैजानु पर्दछ ?
मेरो बिचारमा यो पेशालाइ राज्य र स्थानीय तहले समग्र महिलाहरुलाइ तालिमा गराइ अगाडि बडाउनु पर्दछ ।
अरुकै पार्लरमा काम गरेमा पछि मात्र आफ्नो ग्राहकलाई रिजाउन सक्ने हुन सकिन्छ ।
पार्लरमा धेरै प्रकारका क्रिम तथा कस्मेटिक सामानहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको खर्चलाइ पनि मेन्टेन गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । पहिला सबै कुरामा पोक्त नभइ कुनै काम गर्दा घाटा पनि हुन सक्ने थापरको भनाइ छ । यो पेशा प्रति युवाबर्गहरुलाई आर्कषित गर्न जरुरी छ ।
यो पेशा लाइ मानिसहरु अलि अर्को नजरले हेर्दछन यसमा तपाइको भनाई के छ ?
मान्छेको मन हो जस्ले जस्तो नजरले पनी हर्ने सक्छ तर योपेशा तेस्तो होइन र बकन्फुसे हल्ला सुन्नु राम्रो पनी होइन र जती नराम्रो सुनियको छ यो सबै गलत हुन यो पेशा जस्तो राम्रो पेशा महिलाहरुकालागी अरु कुनै हुनै सक्तैन ।
बिउटिसीयन टयालेन्ट नेपाल सिजन ३ को सेकेन्ड रनरअफ पनी हुनुह तेहाबाट के सिक्नु भो ?
मैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ । ब्यतित्व बिकाश , आत्म बिश्वास , बोलीचालीको बिकाश ,ब्यूटीसीयन सम्बन्धी धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ ।
यो पेशा बाट कतिको आम्दानी गर्न सकिन्छत ?
सामान्य परिवार पाल्न देखि लिएर महिनाको डेड दई लाख सम्मा कमाउने गरेका छन ।
पार्लर सञ्चालन गर्दा ग्राहक कम आएमा र आफुले गर्ने काम राम्रो हुन नसकेमा समस्या आउने हुँदा यसको लागि पहिला २ वर्ष जति अरु कुनै पार्लरमा काम गरि सिक्न जरुरी हुने छ ।
आजभोलिको ट्रेन्ड बदलिदै आएको हुँदा कलर र फेसियलका ग्राहकहरु बढि आउने भएकाले यस्ता कामहरु सफाइका साथ गर्न सक्नु पर्ने जरुरी हुन्छ ।
‘पार्लर सुरु गर्दा क्वालीटि र डिलीङमा समस्याहरु आउने हुँदा कम्तिमा २ देखि ४ वर्ष अरुको पार्लरमा काम गरी आफ्नो सिप आर्ज गर्नु उपयूक्त हुने छ ।
तपाइ एउटा बिवाहित महिला हुनुहुन्छ यो पेशामा लाग्न कतिको सहज छ ?
अरुकोमा के छ मलाइ थहा छैन तर म बिवाहित महिला हु, मेरो सानो छोरी पनी छ गारो त महिलालाई हुन्छनै तर मलाई मेरो श्रमिानले सहयोग गर्ने भहेकाले सहजै भहेको छ ।
यसरी सामान्य ब्यूटी पार्लर सुरुगर्दा एउटा थ्रेडिङ चियर, फेसियल बेड, सावर, कटिङ चियर र स्टिर चाहिने गर्छ । यी सबै सामाग्री बिना एउटा पार्लर सञ्चालन गर्न असम्भव हुन्छ ।
ब्यूटी पार्लर सुरु गर्न ३ वा ६ महिनाको कोर्ष लिएर मात्र हुँदैन त्यसमा पोक्त हुनको लागि कम्तिमा पनि १ वर्षसम्म कुनै पार्लरमा काम गरेको हुनुपर्छ ।
यसरी अरुकै पार्लरमा काम गरेमा पछि मात्र आफ्नो ग्राहकलाई रिजाउन सक्ने हुन सकिन्छ । पार्लरमा धेरै प्रकारका क्रिम तथा कस्मेटिक सामानहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको खर्चलाइ पनि मेन्टेन गरेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । पहिला सबै कुरामा पोक्त नभइ कुनै काम गर्दा घाटा पनि हुन सक्ने छ ।
ट्याग : #ब्यूटीसीयन पेशा, #मिना लामा